NYI LYNN SECK 18+ DEN: Vanessa Mae : Choreography
ဗနစ်ဆာမေဟာ ၂၁ရာစုရဲ့ အကျှောကြားဆုံး လျှပ်စစ်တယော ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စကဿငာပူမှာ မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃နှစ်မှာ ပီယာနို စတင်တီးခတ်ခဲ့ပြီး အသက် ၅နှစ်မှာ တယောကို တီးခတ်ခဲ့တယ်။ ဒီအယ်လ်ဘမ်မှာတော့ သူ့သီချင်း အပြင်းစားတွေ သိပ်မပါပါဘူး။ အရင်အခွေတွေထက် စာရင် အများကြီး နူးညံ့သွားပါတယ်။ အောက်က လင့်ခ်တွေမှာ တစ်ပုဒ်ချင်း ကူးယူပါ။ ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာ သုံးလို့ မရဘူး ထင်ပါတယ်။ Right Click> Save As နဲ့ ကူးယူပါ။
1. Sabre Dance
2. Roxanne’s Veil
3. Bolero For Violin and Orchestra
4. Tango De Los Exilados
5. The Havana Slide
6. Emerald Tiger
7. Tribal Gathering
8. Raga’s Dance
9. Moroccan Roll
10. Handel’s Minuet
11. Classical gas
All songs are in high quality, at least 8mb each. [320kbs]
Download from Here : [Link]
Technorati Tags: Choreography, Vanessa Mae, Mp3, Download
Posted by NLS at 9/22/2006 02:43:00 AM
No response to “Vanessa Mae : Choreography”